မီဒီယာနှင့် ဖင်ကိစ္စ | ဥက္ကာကိုကို
Posted in: သရော်စာ, ဟာသများ, ပြောချင်တာပြောမယ်.	1 Comment
““ဘယ်ကောင်လဲ.. ဘယ်ကောင်လဲ…. ငါ့ဖင်ကိုနှိုက်တာ… ငါ့ဖင်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဟော့သလို ဟော့သလို နောက်ကနေ နှိုက်နေတာ ဘယ်ကောင်လဲ”” – ဟူ၍ အော်ဟစ်လေတော့၏။
အတင်းထောက်များက ခွေးနှစ်ကောင်ဖင်ပူးတာကိုတောင် အလွတ်ပေးသူများမဟုတ်တော့ ခင်ပပ၀တီလှိုင်သိန်း ထောင်ရှေ့မှာ ဖင်နှိုက်ခံရသည့်ကိစ္စက မပြီးပြတ်သွားခဲ့ပေ။ တိုးတိုးတဖုံ၊ ကျယ်ကျယ်တမျိုးဖြင့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်သို့ပင် ရောက်ရှိသွားလေသည်။
မိန်းကလေးများတွင် ရင်ရော ဖင်ပါမရှိလျှင် ယောက်ျားလေးများနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး မိန်းမသားတို့ကြွေးကြော်လေ့ရှိသော ယောက်ျားများနှင့်ရင်ဘောင်တန်းမည်ဟူသည့် အဆိုသည်လည်း အောင်မြင်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းကြကုန်၏။
အတင်းသင်တန်းများပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းကျောင်းကြီးများကလည်း ဖင်စပါယ်ရှယ်လစ်သင်တန်းများကိုပါ ထည့်သွင်းဖွင့်လှစ်ရန် စဉ်းစားလာကြလေ၏။ နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း ဥပမာ- မောင်ခိုင်(ဖင်ဗေဒ) စသဖြင့်… မောင်နိုင်(PHD-Phin) စသဖြင့် ဖင်မေဂျာဖြင့်ဘွဲ့ရများ၊ ဖင်လော်ဆော်ဖာပညာရှင်များ မွေးထုတ်သင့်ကြောင်း လွှတ်တော်တွင်အဆိုပြုရန် ဂျာနယ်များမှတဆင့် ခပ်တည်တည်တိုက်တွန်းကြသော် လွှတ်တော်အမတ်များလည်း ဖင်ကျိန်းရလေ၏။
အတင်းထောက်မိန်းမသားများကလည်း အဆိုပြုချက်များကို အတိအလင်းကန့်ကွက်ကြကာ ဖင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီတစ်ရပ်ကို စုဝေးဖွဲ့စည်း၍ ခံစစ်ပြင်လိုက်ကြလေ၏။ ထိုအတင်းထောက်မိန်းမသားများ ဖင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီကို အတင်းထောက်လောကအတွင်းရှိ ဖင်ကြီးသူများက ဦးဆောင်ကြလေ၏။ ဖင်မဟာဗျုဟာများကိုချမှတ်ကုန်လေ၏ ဖင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖင်များနေ့ကို သတ်မှတ်ကြကုန်လေ၏။
အစည်းအဝေးများတွင်လည်း “တင်ပြသည်” ဟူသော စကားလုံးအစား “ဖင်ပြသည်” ဟူသောစကားလုံးကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးစွဲလာကြလေတော့၏။
နည်းပညာကမ်ပနီများကလည်း မိန်းကလေးများဖင်မှာတပ်ဆင်ရန် အလို့ငှာဆို၍ အသားကပ်စီစီတီဗီကလေးများကို တီထွင်ဖြန့်ချိကြကုန်လေ၏။
အ၀တ်အစားဒီဇိုင်နာများကလည်း “ဖင်ပျောက်ဝတ်စုံ” ဆိုသည်များကို ဖောဖောသီသီတီထွင် ဖြန့်ချိလာကြလေ၏။ အမှန်တကယ်ဝတ်ဆင်ကြည့်သောအခါ ဖင်မပျောက်ဘဲ ဖင်ကောက်လာသည်ကိုသာ မြင်ကြရလေ၏။
“ဖင်ပိန်ရင် ဆိတ်သားရေနဲ့ဖုံး”ဟူသည့် စကားပုံများပေါ်လာသဖြင့် ဖင်ပိန်သောမိန်းကလေးများဖုံးကွယ်ရန် သူ့ဘာသာနေသော ဆိတ်များကို အရေခွံဆုတ်ကြလေ၏။
ထိုသို့… ထိုသို့ဖြင့် ….
← “”မိုးသည်းည သန်းခေါင်ယံ လေးနာရီတိတိအကြာ လျှပ်စီးတစ်ချက်နှင့် စိတ်နာမ်တစ်ခု ရွေ့လျားခြင်း””
““၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ (၂)”” →
One comment on “မီဒီယာနှင့် ဖင်ကိစ္စ”
ကံမသား on May 24, 2013 at 9:23 am said: